कुन राशिका महिलाको सेक्स स्वभाव कस्तो ? (राशिअनुसार जान्नुहोस्)  Hamrosandesh.com
कुन राशिका महिलाको सेक्स स्वभाव कस्तो ? (राशिअनुसार जान्नुहोस्)
‘सेक्स’ सन्तान उत्पादनको प्राकृतिक नियम भएपनि यसलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । महिला र पुरुषबीचमा स्वभाविक रुपमा हुने आकर्षण अन्ततः सेक्समा परिणत हुन्छ । यसले शारीरिक र मानसिक वा भौतिक र आध्यात्मिक सुख दिन्छ । सेक्सले सन्तुष्टि पनि दिन्छ जसले मान्छेको दैनिक क्रियाकलापदेखि दीर्घायुसम्मलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । तर सेक्सले विकृत रुप धारण गरेमा समाजमा अपराध, हिंसा र विद्रोह सिर्जना हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक मान्छेले आफ्नो सेक्स जीवनलाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ ।
(यो सामग्री एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको हो । यहाँ उल्लेख भएअनुसार सबैको स्वभाव यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । तपाईंको पार्टनरको स्वभाव कस्तो छ त्यो तपाईंले अध्ययन गर्ने कुरा हो । तैपनि तपाईंले अहिलेसम्म पार्टनरको सेक्स स्वभाव अध्ययन गर्नु भएको छैन र यसैकारणले सेक्सजीवनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने माथि उल्लेखित कुराहरुलाई अनुशरण गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ । यो सामग्री प्रकाशन गर्नुको हाम्रो उद्देश्य तपाईंको यौनजीवनलाई सहज बनाउन केही सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो ।–सम्पादक)